Kopian'ny AirPods izay mihoatra ny moraly | Avy amin'ny mac aho
Kopian'ny AirPods izay mihoatra ny moraly
Peter Rhodes | | Apple, Apple products
Isaky ny mamoaka vokatra vaovao i Apple dia miseho ny kopia. Indraindray ireo kopia ireo dia tsy mahatoky araka ny tokony ho izy, fa raha sanatria izany Androany izahay manome anao ny kopia tsy misy henatra ary mifanila amin'ny tsy fahalalam-pomba.
Mazava fa i Apple rehefa hametraka vokatra vaovao eny an-tsena dia manangona vola be amin'ny R + D + I satria izao tontolo izao izay anaovantsika fampandrosoana dia tsy mijanona mivoatra ary ny teknika miaraka amin'ny teknolojia no mandeha.
Iray amin'ireo vokatra tsy nijanonan'ny Apple ny fivarotana azy hatramin'ny nanehoany ny AirPods, fahagagana mahagaga momba ny injeniera bitika izay nanjary nohitsakitsahin'ireo fiasa nampiharin'i Apple tao amin'izy ireo.
Mazava fa ny foto-kevitra mitovy tsy misy tariby ankoatry ny endrika ananany sy ny tranga hametrahana azy ireo dia nahatonga azy ireo safidy tena tsara na dia eo aza ny vidiny fa na dia 179 euro aza dia ambany lavitra noho izay hitantsika amin'ny marika hafa toy ny Samsung, Apple Beats na Bose.
Eny, afaka mifaly ireo tia kopia satria raha ny tadiavin'izy ireo dia ny fananana headphone tsy misy tariby amin'ny endrika AirPods nefa tsy AirPods dia efa nahavita ny asany tsara ny Sinoa. Hitanay tamin'ny Internet ny kopian'ny AirPods mahatoky ary rehefa milaza izahay fa mahatoky dia tena tsara tokoa satria Ny hany zavatra miova dia ny karazana famaranana ny plastika izay tsy fotsy sy manjelanjelatra ary koa ireo sensor izay an-telefaona izay amin'ity tranga ity dia novaina ho bokotra bokotra.
Mazava ho azy fa ambany kokoa ny vidiny ka ho betsaka ny olona liana amin'ity vokatra ity. Misy maodely telo arakaraka ny endrik'ilay lakandran-tsofinao satria, araka ny fantatrao, Apple dia nanangana fepetra fotsiny ka tsy mety amin'ny AirPods ho an'ny olona rehetra. Miantso ny tenany ireo modely I7S, I8S ary ny I9S.
Araka ny hitanao dia miova kely ny tranga misy azy ireo ary koa ny endrik'ireo kapila. Ny iray izay tena dika mitovy an'ny an'i Apple dia ny maodelin'ny I9S ary ampidirin'izy ireo ao anaty kitapo fitaterana ankoatra ny tarika izay manatevin-daharana azy ireo mba tsy hahavery azy ireo isika noho ny fianjerana. Ny vidiny dia manomboka amin'ny 25,81 euro hatramin'ny 31,31 euro ary afaka mianatra bebe kokoa momba azy ireo ianao amin'ny rohy manaraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Kopian'ny AirPods izay mihoatra ny moraly
Juan Ma Noriega Cobo dia hoy izy:
jojojojo efa manana satroka vaovao aho xD
Valiny tamin'i Juan Ma Noriega Cobo
Arovy ny MacBook Pro Retina anao amin'ny tanany valopy vita amin'ny fingotra
Logoist 3, efa hita ao amin'ny Mac App Store